I-Huntingdon Tier Forest Retreat-Ibhasi kunye neTubhu eshushu
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguTess
Umphezulu wentaba, i-off-grid eguqulelwe kwibhasi yesikolo - indawo yokuhlala yebhasi yaseTreetop yindawo yokubaleka, ukuphumla, ukuqhawula kunye nokuxhuma kwakhona. Ngenxa yothando lwendalo engqongileyo yaseTasmanian, iHuntingdon Tier Forest Retreat yindawo onokuthi ube kuyo ngokulula-ukuphefumla umoya omtsha, ukuntywila kwitubhu etshisayo eyenziwe ngamaplanga, ukumamela isandi somoya ovuthuza amagqabi okanye ukuphumla ngamagqabi. umlilo weenkuni ezishushu kwaye ujonge ngokuzolileyo izilwanyana zasendle ezingqongileyo.
Ithe ngcu phezu kweliwa elijonge intlambo engezantsi, indawo yokuhlala yebhasi yaseTreetop ithiywe ngokufanelekileyo. Ukusuka kwibhedi yakho etofotofo, jonga ngefestile kwimithi engezantsi kwaye - udlule iincopho zemithi - iintaba ezingaphaya kwentlambo. Indawo yokuphumla, idesika yangaphandle kunye nebhafu eshushu imbonakalo efanayo.
IHuntingdon Tier ikwalikhaya leenkozi ezimbini ezinemisila enencasa yazo ikumgama weemitha ezingama-200 kuphela kwaye zibonwa zityhutyha intlambo kangangeentsuku ezininzi.
Kwabo banomdla omncinci, umqolomba wendalo wabucala unokufunyanwa nje ngeemitha ezingama-30 ngaphantsi kwendlu yakho. Yenzelwe ukuba isetyenziswe njengendawo yokucamngca, uya kufumana umbhoxo kunye neekhushini zokuthuthuzela kwakho. Nceda uqaphele, umzila umnqantsa kwaye unomngeni omncinci ngoko ke zinakekele kwaye uthathe ixesha lakho.
Ukuba ukonwabela imveliso yasekuhlaleni kuvakala kunomtsalane, ikhitshi lixhotyiswe kakuhle ukuze kuphekwe isidlo saseTasmania. Sinikezela ngezinto ezisisiseko - ioli yeoli, ityuwa, ipepile, iswekile, ikofu ye-espresso kunye nobisi - ke ungalibali ukucwangcisa kwangaphambili kwaye ufumane izithako zakho kwangaphambili. I-Supermarket ye-IGA yendawo (efumaneka e-Brighton) yimizuzu engama-20 yokuqhuba kwaye inokhetho oluhle lweemveliso zasekhaya.
IHuntingdon Tier yeyona ndawo ifanelekileyo yokunxibelelana kwakhona-awuyi kufumana wifi okanye umabonwakude apha. Ngelixa inkonzo yefowuni ephathwayo ifumaneka ngothungelwano olukhulu, sicebisa ukuba uvule impendulo yakho ezenzekelayo ngaphandle kwe-ofisi - yiza nencwadi okanye ukhethe enye kwishelufa engaphezulu kwebhedi yakho endaweni yoko.
Ukuba imozulu ibusika (iTasmania ayaziwa ngokutshisa kwelanga, nangona siyifumana!), Ipholile kumlilo wamaplanga angaphakathi okanye - kwabo bakulungeleyo ukulinda ngelixa amanzi eshushu ukuya kwiqondo lobushushu - bayonwabela iinkuni ezibasiweyo. ibhafu eshushu ngaphandle.
Ngelixa igumbi lingaphandle kwegridi, uya kufumana yonke into oyifunayo ukuze uthuthuzeleke. Nceda uqaphele nangona kunjalo, isixokelelwano samandla elanga kunye namanzi emvula athetha ukuba ezi zixhobo azinasiphelo. Izomisi zeenwele kunye nezinye izixhobo zombane ezinento yokufudumeza ziya kuphelisa unikezelo lwamandla ngokukhawuleza, ngoko ke asikukhuthazi kakhulu ukusetyenziswa kwazo.
Ngokuqinisekileyo le ndawo inomtsalane kodwa ukuhlala phezu kweliwa kuthetha iingozi ezithile. Ngesi sizathu, iHuntingdon Tier ayikwazi ukuhlalisa abantwana, iindwendwe ezikhubazekileyo kunye nezilwanyana zasekhaya. Sikwacela ukuba iindwendwe zethu zijonge kuphela iindawo ezingaphandle (ngaphandle kwendlu yazo) ngexesha lemini.
I-Huntingdon Tier Forest Retreat ibekwe encotsheni yentaba ejonge kwintlambo yeefama kunye neentaba ezikude. Lo mhlaba umi malunga ne-6km ukusuka kuhola wendlela weSizwe woku-1 kuMmandla oMazantsi eMidlands eDysart.
I-Hobart CBD: imizuzu ye-50
UMONA: imizuzu engama-35
Brighton: imizuzu engama-20
Kempton: imizuzu eyi-10
Oatlands: imizuzu engama-35
Launceston: 1 iyure kunye nemizuzu engama-45
Umbuki zindwendwe ngu- Tess